Fampiroboroboana ny kolontsaina :: Fampirantiana no hanombohana ny fiaraha-miasan’ny minisitera sy ny La City • AoRaha
Fampiroboroboana ny kolontsaina Fampirantiana no hanombohana ny fiaraha-miasan’ny minisitera sy ny La City
Mitrandraka toeram-baovao hatrany ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera mba hanomezana vahana kokoa ny mpanakanto malagasy. Nahazo alalana hanolotra kanto maroloko, etsy « City Art », ao amin’ny La City Ivandry, ireo mpanakanto manerana ny Nosy, taorian’ny fanomezan-toky handefasana ny sarimihetsika malagasy sy ny hanolorana sehatra ho an’ireo mpihira sy mpandihy, etsy amin’ny Canal Olympia Andohantapenaka. Voasonia teny an-toerana omaly ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ity ivon-toerana ity. Dimy ambin’ny folo andro isam-bolana no omena an’ireo mpanakanto. Ny Ofisy nasionalin’ny kanto sy ny kolontsaina (OFNAC) no miandraikitra ny fandaharam-potoana rehetra.
Mpanao hosodoko telopolo, hampiranty ny « Madagasikara Miloko », no nisantatra ny sehatra vaovao izay nosokafana omaly ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 27 aogositra ho avy izao. “Manan-talenta ny Malagasy. Vitsy anefa ny sehatra hahafahan’izy ireo maneho izany. Io no nahatonga ny minisitera hitady toerana hahafahan’ny rehetra mahita ireo vokatra avy amin’ny mpahay kanto malagasy io”, hoy ny minisitry ny Kolontsaina sy ny serasera, Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana.
Manentana an’ireo mpanakanto izy, noho izany, hampiasa ny toerana nomena. Maimaim-poana avokoa ny fandraisana anjara rehetra. Raha misy aza ny lelavola alaina, natao hanampiana ny kitapom-bola “Lovako” ho an’ny mpanakanto sy ny kolontsaina izany.
Mozika klasika :: Hatomboka eny tanànan’ny mompera Père Pedro ny « Nosy-Be Symphonie »